What is hosting ? - MYSTERY ZILLION
I don't know hosting? please explain me
Hosting ဆိုတာက မပြောခင် website ဆိုတာကို အရင်ပြောချင်တယ်။
ASP.NET က microsoft က ထုတ်တာဖြစ်ပြီး windows OS တစ်ခုမှာပဲ run လို့ရတယ်။
PHP , ROR ကတော့ windows, mac , linux စတာတွေ မှာ run လို့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ website တွေ ရေးပြီးသွားရင် online ပေါ်မှာ လွှင့်တင်ဖို့အတွက် global ip လိုအပ်လာတယ်။ Global IP ဆိုတာက နိုင်ငံတကာက 10.10.10.10 ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ server ဆီ တနည်းပြောရင် အဲဒီ computer ဆီ တန်းရောက်သွားတာမျိုးပေါ့။ အဲလို ကိုယ်ပိုင် IP ရဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ ISP တွေမှာ လျှောက်ရတယ်။
Global IP က စျေးများတဲ့အတွက် မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုရင် Global IP ရှိပြီးသား hosting provider တွေကနေ တဆင့် ကိုယ့် website ကို လွှင့်တင်လို့ရပါတယ်။
လူတိုင်းက IP ကို မမှတ်ထားနိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး IP တစ်ခု တည်းနဲ့ website တွေ အများ​ြကီး သုံးချင်တယ်။ အဲလိုတွေအတွက် domain name ဆိုတာကို အသုံးပြုရတယ်။
www.aaa.com ကို IP 9.9.10.22 နဲ့ ချိတ်ထားတယ်ဆိုပါတော့။ www.aaa.com ခေါ်လိုက်တာနဲ့ 9.9.10.22 computer ဆီ ရောက်သွားမယ်။ အဲဒီ computer က ဘယ်ကလာတာလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်တယ်။ aaa.com က လာတာ။ ဒါဆို ဒီ page ပြဆိုပြီး ညွှန်လိုက်တယ်။ အဲလိုမျိုး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကိုယ့် website တွေကို internet မှာ လွှင့်တင်ဖို့ Global IP အရန်သင့်ရှိပြီးသား hosting provider တွေကနေ website လေး တင်လိုက်ရုံပဲ။ စရိတ်သက်သာသလို အချိန်ကုန်လည်း သက်သာတယ်။
Hosting provider မှာ
Computer တစ်လုံးတည်းမှာ သူများ website တွေကော ကိုယ့် website တွေပါ ပေါင်းပြီး သုံးရတယ်။ CPU , memory စတာတွေကို share သုံးရတယ်။ ဒါကြောင့် စျေးသက်သာတယ်။
computer မှာ VPS တစ်လုံး လုပ်ထားပြီး သူပေးထားတဲ့ cpu , memory စတာတွေကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုလို့ရတယ်။ service ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး စျေးကွာတယ်။ shared hosting ထက် စျေးများတယ်။ ကိုယ့် VPS အတွက် global ip တစ်ခု ရမယ်။
computer တစ်ခုလုံး အပြည့်အဝ အသုံးပြုလို့ရတယ်။ VPS လိုမျိုး Vritual မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် စျေးတော့များတယ်။
VPS လို့ပဲ ဆိုရမယ်။ သို့ပေမယ့် ချုံ့လွယ် ချဲ့လွယ်တယ်။ VPS လိုမျိုး ကန့်သတ်ထားတဲ့ CPU , memory တွေ ရှိပေမယ့် လိုသလို ချုံ့ချဲ့နိုင်တယ်။ bandwidth , CPU , memory , harddisk space ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လစဉ်ပေးရတယ်။
Thanked by 1 Curio
Added free web hosting service
web hosting service that is free, usually advertisement-supported. Free web hosts will usually provideasubdomain (sitename.example.com)
oradirectory (www.example.com/~yourname). In contrast, paid web hosts will usually provideasecond-level domain along with the hosting (www.yourname.com).
@saturngod What do you think about mono for ASP.NET? http://www.go-mono.com ..
I also wrote about mono even through i am not very aware of it . you can read it <a href="http://m0rris.com/2011/04/24/how-to-run-asp-net-applicatio-in-ubuntu/">here</a>; too
I use mono for ASP.NET with C# on my mac .. Tough not fully integrated development environment, it is worth to giveashort in linux hosting environment ..